भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र कस्तो छ ? - Narayanionline.com Narayanionline.com भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र कस्तो छ ? - Narayanionline.com
भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र कस्तो छ ?
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाले धेरै चर्चा पाएको छ । भरतपुरमा नेकपा एमालेबाट विजय सुवेदी, सत्ता गठबन्धनबाट रेणु दाहाल, स्वतन्त्रबाट जगन्नाथ पौडेलसहित २७ जना उम्मेदवार प्रमुख पदमा चुनावी घरदैलोमा छन् ।
त्यसैगरी देशभरका छ वटा महानगरपालिकाहरुमा डेढ सय भन्दा बढी मेयरका उम्मेदवारहरु छन् । अनुमान गरेभन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन आयोगले मनोनयन सकिएपछि मात्रै भरतपुर महानगरपालिका सहित अन्य महानगरपालिकाको स्थानीय तहका मतपत्र छापेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्रमा ३६ वटा चिन्ह छन् । दुई लहरमा मतपत्र छापिएको छ । सबैभन्दा पहिलो लहरको पहिलो नम्बरमा दायाँतिर एमालेको सूर्य चिन्ह रहेको छ भने दोस्रो लहरको पहिलो नम्बरमा कांग्रेसको रुख चिन्ह रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट कोही उम्मेदवार नभए पनि मेयरमा रुख चिन्ह रहन्छ । पहिलो लहरको दोस्रो लहरमा माओवादी केन्द्रको गोलाकार हसिया हतौंडा रहेको छ । पहिलो लहरको चौथो नम्बरमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको भूइँकटर रहेको छ । दोस्रो लहरको दोस्रो नम्बरमा छाता, तेस्रो नम्बरमा कलम र चौथो नम्बरमा हलो रहेका छन् । पहिलो लहरको चौथो नम्बरमा विवेकशिल साझा पार्टीको तराजु रहेका छन् ।
धेरैवटा चिन्ह रहेको कारणले पनि कतिपय मतदातालाई आफूले चाहेको पार्टीको चिन्ह पत्ता लगाउन कठिन हुने देखिन्छ । यसपटकको मतपत्र सबै हरियो रहन्छ ।